संसारका यस्ता घुम-फिर गर्ने ठाउँ, जुन भिडियो हेर्दामा’ त्र पनि मुटु का, प्छ (भिडियो सहित) – Ap Nepal
संसारका यस्ता घुम-फिर गर्ने ठाउँ, जुन भिडियो हेर्दामा’ त्र पनि मुटु का, प्छ (भिडियो सहित)
१. ब्राजिलको फेविला (स्लम बस्ती):
‘नो् जोन’ क्षेत्र भनिने यो ठाउँलाई संसारको सबैभन्दा चर्चित ठाउँ भनिन्छ । कुनै प्रका’रको कानु’न नचल्ने यो क्षेत्रमा ग्याङ्ग’स्टर र ड्र’ग माफियाको राज चल्छ । पुलिसहरु उनीहरुको यो क्षेत्रमा छिर्ने हिम्मत गर्दैनन् । फिफा वल्र्डकप र ओलम्विक जस्तो खेललाई आयोजना गर्ने बेलामा यो देशले उनीहरुको यो वास्तविकतालाई संसारबाट लुकाउन खोजेको थियो । यद्यपी, यहाँका केही स्लम बस्तीहरु पुलिसको निगरानीमा सुर’क्षित रहेको छ ।
बर्मिंघम मिडल इस्टको बाहिर मुस्लिमको सबैभन्दा ठूलो जन’संख्या भएको शहर छ । यहाँ पुलिस पेट्रोलिङका लागि आउन डराउँछन् । यहाँ एउटा क्याम्पेन चलाइएको थियो जसमा बर्मिं’घम पब्लिक स्कूललाई ‘शरिया लो जोन’ मा परिवर्तन गरियो । बच्चाहरुलाई हलाल गरिएको खाना खान र किशोरी’हरुलाई खेलमैदानमा बुर्का लगाउन दबा’ब दिइयो । यहाँ आजकाल हिं’साको खबर आउने गर्दछ ।
जर्मनीको शहर डुईसवर्गमा कुनै कानुन छैन । पु’लिसको कुनै कन्ट्रोल नहुने यो देशमा चाँडै नै पब्लिक अर्डर पनि सिद्धिन्छ । जर्मन पु’लिस युनिय’नका प्रसिडेन्ट रेनरको भनाई अनुसार यहाँको केही एरि’यामा पुलि’स आफ्नो कार रोक्ने गर्दछन् किन’भने उनलाई थाहा छ कि यहाँ जाँदा उनी’हरुलाई ४०–५० मानिसहरुले घेर्ने गर्दछन् ।
जर्मनीको यो दोस्रो शहरलाई पनि ‘नो गो’ जोन घो’षित गरिएको छ । यहाँ केही दिन पहिले पुलिसले दुई मानिसहरुलाई पक्रा’उ गरेका थिए । केही टाढा जाँदा नै पुलि’सलाई १०० मानिसहरुले घेरे । पुलिस फोर्स बोलाए पछि स्थिती कन्ट्रो’लमा आएको थियो ।
फ्रान्सका नागरिकका अनुसार जब उनीहरु रोबिक्समा जान्छन् तब आफूलाई अर्कै देशमा गएको आभाष हुन्छ । यहाँ कुनै प्रकारको नियम र कानुन कु’टपि’ट र तो’डफो’ड नगरी लागु हुँदैन ।
६. गया आइल्याण्डः
चर्चित पर्यटकीय स्थल भ’इकन पनि यो पुलि’सका लागि ‘नो गो’ जोन हो । यहाँ धेरैजसो मानिसहरु अ’वैध रुपमा बस्ने गर्दछन् । यहाँ रहेको ‘क्याम्पङ लोक उराई’ निकै खत’रनाक मानिन्छ जहाँ निकै अ’पराध हुन्छन् । सरकारले त्यो ठाउँलाई हटाउ’नका लागि राम्रो घरको अफर दिएका छन् तर उनीहरुले त्यसलाई अस्वि’कार गरेका छन् ।
७. लण्डन टावर ह्याम्लेट्सः
लण्डनको टावर ह्याम्लेट्समा मुस्लिम जन’संख्या पाइन्छ । यहाँ मानिसहरु ‘शारिया कानुन’ लगाउन चाहन्छन् । महिलाहरु जो उनीहरु अनुसार पहिरन लगाउन अस्विकार गर्छन् उनीहरुलाई सिधै मृ’त्युको स’जायँ दिइन्छ । यहाँ मुश्लिम र गैर मुश्लिम मानिसहरुले शारिया कानु’न नमानेका कारण पि’ट्ने र मा’र्ने गरिन्छ ।
मोलेनबिक ब्रुसेल्सको सबैभन्दा खत’रनाक एरिया हो । यसलाई पेरिस आक्र’मणका लागि जिम्मेवार आतंक’कारीको घर भनिन्छ । यो ठाउँमा पु’लिस जान डराउँछ भने यता सरकारले पनि यहाँका मानिसका लागि कुनै सुविधा दिएका छैनन् । यहाँ न कुनै विद्यालय छन् न त कुनै काम गर्ने ठाउँ नै । यो ठाउँलाई युरोपियन सरकारको विफ:लताको रुपमा हेरिन्छ ।
यो दक्षिण फ्रान्सको एउटा सानो सहर हो । यहाँ पु’लिस पे’ट्रोलिङका बेला निकै ठूलो ल’फडा हुन्छ । यो एरियालाई पनि ‘नो गो जोन’ भनिन्छ । यसलाई फ्रान्समा मिनी मुस्लि’म कन्ट्री भनिन्छ । यहाँ ड्र’ग डिलि’ङ, नस्ल’वाद, आदिवासी हिं’सा हुनु सामान्य हो । फ्रान्सेली नागरिकले मुस्लिमको नियम नमान्नु नै यहाँ हिं’सा हुने प्रमुख कारण हो ।
भोल्समोसे डेनमार्कको तेस्रो ठूलो सिटी हो जहाँ पु’लिस जाँदैनन् । यहाँ थुप्रै संख्यामा आप्रवासी मानिस’हरु पाइन्छन् । यहाँ आपरा’धिक क्रियाक’लाप निकै धेरै हुन्छ । यहाँका मानिसहरुसँग रोजगारी पनि छैन । यहाँका कोही मानिस’हरुसँग अटोमेटिक हतिया’र पाइएको खबर पनि आउने गरेको छ ।
Prev‘दोहोरी च्याम्पि यन’ बिबाद पछि – कल्पना दाहालले पहिलो पटक दिइन् यस्तो प्रति कृया (भि डियो हेर्नुहोस्)
Next‘फोटो फिरिममा २’ प्रताप दा सले नै गाउने भए । प्रतापले भन्छन- गायिका रचना रिमाल नै हु, नुपर्छ (भिडियो हेर्नुस)
इन्द्रेणी बिवा,दबारे टिका सानुले पहिलो पटक मिडियामा बोलिन् । के कृष्ण कडेंलसँग सम्बन्ध बिग्रि;एको हो ? (हेर्नुस् भि’डियो)
अभिनेता राहुलको अन्तिम भिडियो बाहिरियो,कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका लाइबमै भने “डाक्टरले अक्सिजनको साटो मास्क मात्रै लगाइदिए” भिडियो सहित
‘फुलबुट्टे सारी’ गाउने अफ्रिकन गायिका मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा , बिहे गर्छु भने पछी आत्ति, ए मुन्द्रे….(हेर्नुहोस रमाइलो भिडियो)